China portable rano any ivelany etona etona etona cooler XK-15SY orinasa mpamatsy sy mpamatsy | XIKOO
Anaran'ny marika: XIKOO
Fanamarinana: CE, EMC, LVD, ROHS, SASO
OEM / ODM misy: ENY
Ora nanomezana: Alefaso ao anatin'ny 15 andro aorian'ny fandoavana
Seranana fanombohana: Guangzhou, Shenzhen
Fepetra fandoavana: L / C, T / T, WesternUnion, Cash
XK-13 / 15SY cooler etona etona etona etona an-kalamanjana dia malaza indrindra amin'ny alàlan'ny rivotra mangatsiaka azo entina miasa, afaka mampihena ny mari-pana amin'ny alàlan'ny etona amin'ny rano amin'ny fanjifana ambany. Misy endri-javatra toy ny etsy ambany:
Vatan'ny plastika PP vaovao, Anti-UV, Anti-fahanterana, fotoana lava iainana. loko fotsy sy fotsy fotsy roa ho an'ny safidy, ny endrika dia natao malala-tanana, marevaka ary tsara tarehy.
Fanjifana herinaratra ambany indrindra 0.68kW / h & 15000m3 / h herinaratra mahery, manarona 80-100m2.
Rivotra madio sy mangatsiaka ary madio
Telo lafy manana kalitaon'ny 5090 # tantel-dranon-tantely misy sivana vovoka, miasa amin'ny habakabaka malalaka mba hitondra rivotra madio sy mangatsiaka ary madio.
LCD tontonana fanaraha-maso porofo momba ny rano + fanaraha-maso lavitra, hafainganam-pandeha 3 hafa, kodiarana iraisana misy hidiny. Misy fiarovana mihoatra ny enta-mavesatra sy paompy, fikosehana Auto hanarona faritra lehibe. Fantson-drano lehibe 100L. Misy fomba fidiran-drano roa amin'ny alàlan'ny manual sy Auto.
Fizarana kalitao XIKOO
Motera tariby varahina 100%, mpankafy fitaovana fitaratra PP sy fibre, paompy entina anaty vovo-keramika ary faritra hafa misy kalitao.
Warranty aorian'ny fivarotana
Fiantohana tokana feno 1 taona.
Fiantohana motera 2 taona.
Fiantohana pad mangatsiaka 3taona.
Vatan'ny plastika: 5taona
TOSIKARATRA / Hz 110V / 220 ~ 240V / 50 / 60Hz
Faritra rakotra singa tokana 80-100m2
Airflow (M3 / H) 13000/15000
Fanaterana ny rivotra 12-15M
feo ≤65 db
Siniben-drano 100 L
Fanjifana rano 10-15 L / H
Lanja afa-karatsaka 40Kg
Pad hihena Lafiny 3
Vovoka sivana vovoka ENY
Loading Quantity 106pcs/ 40HQ 42pcs / 20GP
Karazana fanaraha-maso LCD Display+ Fanaraha-maso lavitra
Fanaraha-maso lavitra ENY
Over Protection Load ENY
Fiarovana paompy ENY
Fidirana rano boky fampianarana & Auto
Karazana plug Namboarina
Fonosana: Kitapo plastika + paleta busa + baoritra
Fampiharana : XK-13 / 15SY rivotra cooler dia malaza indrindra amin'ny fivarotana, efitrano fiofanana, gara, hopitaly, trano fisakafoanana, toeram-pambolena, lay, fivarotana lehibe, atrikasa, trano fitehirizana ary toerana hafa.
XIKOO dia mifantoka amin'ny fampandrosoana ny rivotra mangatsiaka kokoa ary manamboatra mihoatra ny 13 taona, mametraka ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa hatrany aloha izahay, manana fenitra henjana amin'ny safidy materialy izahay, fizahana fizarana, teknolojia famokarana, fonosana ary ireo dingana rehetra. Manantena ny mpanjifa rehetra hahazo ny cooler XIKOO mahafa-po. Hanaraka ny fandefasana rehetra izahay mba hahazoana antoka fa hahazo ny entana ny mpanjifa, ary manana fiverenana aorian'ny fivarotana amin'ny mpanjifantsika izahay, manandrana mamaha ny fanontanianao aorian'ny fivarotana, manantena izahay fa hitondra ny traikefan'ny mpampiasa ny vokatray.
Tongasoa eto amin-kafanam-po hifandray aminay, hitsidika ary hiara-hiasa amin'ny XIKOO!
Teo aloha: Ny etona misy rivotra mangatsiaka azo entina any Shina dia manamboatra XK-06SY
Manaraka: 18000m3 / h 23000m3 / h fandefasana rivotra lehibe azo entina mangatsiaka kokoa amin'ny rivotra indostrialy XK-18 / 23SY
Famokarana rivotra mangatsiaka kokoa
Cooler any ivelany
18000m3 / h 23000m3 / h fandefasana rivotra be dia be ...
tany lemaka etona etona etona mangatsiatsiaka kokoa ...
Cooler etona etona etona indostrialy ho an'ny ...
etona etona etona etona etona etona mandeha any Shina Manu ...
efitrano kely azo entina etona etona etona miaraka amin'ny ...